Warar dheeraad ah oo kasoo baxaayo Dagaal lagu dilay Ciidamo AMISOM oo ka dhacay… |
Warar dheeraad ah oo kasoo baxaayo Dagaal lagu dilay Ciidamo AMISOM oo ka dhacay…
Afgooye(Somalimeida.co.uk) Wararka naga soo gaarayo Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa sheegaya in halkaasi uu Dagaal culus oo hubka noocyadiisa kala duwan leysu adeegsanaayo uu ku dhexmaray Ciidamada DF oo garabsanaaya kuwa AMISOM iyo Maleeshiyada Alshabaab oo dhinac ah.
Dagaalka oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxa uu Culeyskiisu ka dhacay wadada xiriirisa Magaalada Muqdisho iyo Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Dagaalka ayaa waxa uu markii dambe u fiday dhanka deegaanka Arbacow oo ku dhow deegaanka Ceelasha Biyaha, waxaana goobta la weeraray fariisimo ku lahaa Ciidamada AMISOM ee ka howlgala Somalia.
Dagaalka ayaa bilowday kadib markii Maleeshiyada Alshabaab ay weerar culus ku qaaden fariisimaha Ciidamada AMISOM waxa uuna weerarka u badnaa madaafiic, iyadoo Ciidamada AMISOM ay kaga jawaabeen hubka waaweyn.
Inta la xaqiijiyay Dagaalka ayaa waxaa ku dhintay ilaa Seddex kamid ah Ciidamada AMISOM, halka Maleeshiyada Alshabaabna looga dilay Afar kamid ahaa dagaalyahaanadooda.
Saraakiisha Ciidamada DF, AMISOM iyo Maleeshiyada Alshabaab, ayaan wax war ah ka soo kala saarin dagaalkaasi.